Madaxweynihii hore Yemen Cali Cabdallah Saalax : Diyaar baan u nahahay Wadahadal lala galo Sacuudiga | SAHAN ONLINE
Madaxweynihii hore Yemen Cali Cabdallah Saalax : Diyaar baan u nahahay Wadahadal lala galo Sacuudiga
SANCA – Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdallah Saalax ayaa sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal ay la galaan xulafada uu hoggaamiyo Sacuudiga kadib markii uu la wareegay sabtidii in badan oo kamid ah caasimada Yemen ee Sanca.
Xuutiyiinta iyo Cali Cabdallah Saalax ayaa bishii lasoo dhaafay khilaaf xooggan uu soo kala dhexgalay.
Labadan oo markii hore isbahaysi isku dhan ka ahaa Xukuumadii Cabdulrabi Mansuur Hadi ayaa si wadajir ah u qabsaday caasimada Sanca dhammaadkii sanadkii 2014.
Khilaafka ayaa markii dambe keenay in Kooxda Xuutiyiinta ay xabsi guri galiyaan Saalax labadii bilood ee lasoo dhaafay,xurguftaas ayaa todobaadkan isku bedashay dagaal culus oo ka qarxay Sanca.
Xoogga ka amar qaata Cali Cabdallah Saalax ayaa muddooyinkii dambe is abaabulayey kuwaaso weerar ku qaaday xarumaha dowladda ee caasimada iyagoona la wareegay inta badan xarumihii Wasaaradaha iyo Warbaahinta.
Cali Cabdallah Saalax oo sabtidii shalay Warbaahinta kula hadlay magaalada Sanca ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in xal laga gaaro dagaalka ka socda Yemen iyo iney wadahadal toos ah la yeelanayaan Xulafada Sacuudiga oo ay la dagaalamayeen tan iyo 2015.
Hadii walaalaheen iyo deriskeena ay joojiyaan duqeynta iyo xayiraada ay dul dhigeen wadankeena, oo gar gaarka loo furo shacabka, waxaa diyaar u nahay in aan wadahadal la galno….” ayuu yiri Cali Cabdallah Saalax oo fariin u dirayey Sacuudiga.
Afhayeen u hadlay Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay Cali Cabdllah Saalax iyo ciidankiisu inay Inqilaabeen maamulkii ay wada dhisteen,waxayna Xuutiyiintu sheegeen inaysan iyagu marnaba wadahadal la geli doonin Sacuudiga.
Hoggaamiyaha Xuutiyiinta Cabdulmalik Al Xuthi ayaa sheegay in dagaalka ka socda Sanca lagu dhammeeyo wadahadal,wuxuuna kula taliyay Cali Cabdallah Saalax in uu joojiyo xiisada uu wado.
Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdallah Saalax ayaa kamid ahaa Hoggaamiyaashii Carabta ee xilka looga tuuray kacdoonkii carabra ee 2011,balse weli wuxuu awood ku dhexlahaa hay’adaha ammaanka iyo milatariga dalkiisa.
Xukuumadda Soomaaliya Iyo Midowga Yurub oo kala Saxiixday Heshiis ku kacaya €100 milyan oo Euro
Musharax Qoryooley oo Ka Tacsiyadeeyay Dadkii Ku Dhintay Qaraxyadii Baydhabo
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha hoose
Sarkaal Ka Tirsan PSF oo Loo Magacaabay Taliye Ku-xigeenka Ciidamada Xasilinta Garoowe
Khayre oo Waxbarasho lacag la’aan ah u Ballan Qaaday Caruurtii Waalidiintooda Lagu Dilay Qarixii